घटेको हो त विनोद चौधरीको सम्पत्ति ?
अमेरिकन बिजनेस म्यागेजिन ‘फोर्ब्स’ले मंगलबार २०२१ को विश्वका डलर अर्बपतिको सूची निकाल्यो ।
त्यो सूचीमा कोही माथि उक्लिए त कोही तल झरे । नेपालका एक मात्र डलर अर्बपति विनोद चौधरी पनि तल झर्नेहरूको सूचीमा परेका छन् । फोर्ब्सका अनुसार अर्बपतिहरूको लिस्टमा उनी १५ सय १३ औँ स्थानबाट २ हजार १ सय ४१ औँ स्थानमा पुगे ।
पोहोरको तुलनामा उनको सम्पत्ति घटेकै हो त ?
सूचीअनुसार ६ सय २८ स्थान तल झरे पनि उनको सम्पत्ति भने स्थिर छ । उनको सम्पत्ति गत वर्ष १.४ बिलियन डलर भएकोमा यो वर्ष पनि उत्तिनै छ । अरु अर्बपतिको सम्पत्ति धेरै बढेको कारण उनको स्थान खस्किएको हो ।
उनी सन् २०१७ देखि फोर्ब्सको अर्बपतिको सूचीमा पर्न थालेका हुन् । सन् २०१७ उनको सम्पत्ति १.३ बिलियन डलर थियो भने २०१८ मा १.५ बिलियन डलर र २०१९ मा १.७ बिलियन डलर पुग्यो । सन् २०२० मा घटेर १.४ बिलियनमा झरेको उनको सम्पत्ति २०२१ मा स्थिर रह्यो ।
यो वर्ष १ सय ७७ बिलियन कुल सम्पत्तिसहित अमेजनका मालिक जेफ बेजोस विश्वकै धनी व्यक्ति बने ।
त्यस्तै, स्पेस एक्स तथा टेस्ला गाडी निर्माता कम्पनीका मालिक एलोन मस्क १ सय ५१ बिलियन डलर कुल सम्पत्तिसहित दोस्रो, बनार्ड अमोल्ट र उनको परिवार १ सय ५० बिलियन डलरसहित तेस्रो, १ सय २४ बिलियन डलरसहित बिल गेट्स चौथो र ९७ बिलियन डलरसहित फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरबर्ग विश्वको धनाढ्य सूचीमा पाँचौ स्थानमा छन् ।
फोर्ब्सका अनुसार भारतमा सबैभन्दा धनी व्यक्ति मुकेश अम्बानीले ८४.५ बिलियन डलरसहित १० औँ स्थान ओगटेका छन् ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत २५, २०७७, १९:५१:००